CODSIGA IYO SIYAABO WAXTAR LEH OO BADAN - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Saxifrage, ubaxa hore, bergenia, shaah Mongolian ah, shaaha Chagir, beran waa magacyada dhammaan hal warshad. Waxay gaadhaysaa height ah 30-70 cm waxayna doorbideysaa meelo dabaysha oo dabaylo ah, waxay ku kori kartaa lakab kale oo baraf ah. Waxaad kula kulmi kartaa Siberia, China iyo Mongolia.
Warshad Bergenia ah ayaa inta badan loo isticmaalaa daawada dhaqameed, maadaama ay hannaankeeda bogsashadu ay la tacaali karto calaamadaha cudurada kala duwan. Qalabka ceeriin ee daawooyinka waa dhammaan qaybaha geedka - rhizomes, ubaxa, miraha, caleemaha.
Ma taqaanaa? Badan waxaa loogu magac daray botanist Jarmalka Carl August von Bergen. Magaca Laatiinka, magacgu wuxuu u eg yahay Bergenia.
Qodab faa'iido leh ee bergeniya iyo ka kooban
Bergenia wuxuu leeyahay bogsiin, iyo isticmaalka daaweyntu waa suurtogal maadaama ay ka kooban tahay faa'iido leh. Warshadu waxay leedahay hanti sida:
Maaddooyinka macdanta: Calcium, potassium, magnesium, copper, manganese, cobalt, aluminium, vanadium, barium, nikkel, selenium, strontium, ciridka, fareeshka, reinska, zinc, saliidaha lagama maarmaanka ah;
ascorbic acid iyo vitamiin.
Caleemaha Bergenia waxaa ku jira laba jeer arbutin ka badan kii loo yaqaan 'bearberry', taas oo loo tixgelinayo ilaha ugu muhiimsan. Badan waa hogaamiyaha dhirta oo ka hadlaya arimaha arbutin.
The weyn ee warshadda, tannins badan ee rhizome. Waxay sameeyaan bur, rizomes waa la dubi karaa, la kariyey, la cunay.
Sida loo diyaariyo badan
Si aad u badato waxaad u baahan tahay inaad hesho waqti wanaagsan. Qaybaha kala duwan ee warshadu waxay leeyihiin waqtiyo ku habboon tan tan..
Caleenta Bergenia wuxuu leeyahay bogsiin caafimaad oo caan ah. Laakiin tayadaasi waxay leeyihiin kaliya caleemo qadiim ah oo jiilaalka ka hooseysa barafka.
Muddadii ugu fiicnayd ee la gooyey caleemaha Beerta waa guga iyo guga. Caleemaha la uruuriyey waa la dhaqaa, la qalajiyaa oo lagu kaydiyaa sanduuq ama bac warqad. Heerkulka wanaagsan ee qalajinta caleemaha bergenia waa 60 darajo.
Xididdada Badana loo qaaday si ay u goostaan ​​xagaaga hore. Waxay u baahan yihiin inay qodaan, ku dhaq biyo qabow, oo qalalan oo ku faaf dhar ama warqad. Qalajinta, xididdada waaweyn ee Badana waa la jarjarayaa.
1 kg of xididka Badan ee foomka qalajin doonaa kaliya 250 g oo ah wax cayriin. Calaamadaha si fiican loo qalajiyey ayaa ah in aan la leexin, si fiican u jebin. On fasaxa waa in la arkaa dhexe ee midab casaan ama jaale ah.
Caleemaha iyo xididdada Bergenia labadaba waxa lagu kaydin karaa wax ka badan 4 sano..
Ma taqaanaa? Waagii hore, tuulooyinka oo dhan ayaa soo goostay xididdada iyo caleemaha Bergenia, kuwaas oo loo isticmaalay dheecaan maqaarka iyo dheeh.
Bergenia ee daawada dhaqanka
Badan waxay uga mahad celinaysaa tayada faa'iidada leh ay caan ku tahay daawada dhaqameed. Guryaheeda waxay saameyn ku leedahay jidhka cuduro badan.
Polyphenols iyo arbutin ku jira dhirta ayaa leh firfircooni waxyeello sareeya. Arbutin wuxuu kaloo difaacayaa unugyada jidhka ee burburka.
Bergen ee ka kooban qaybta Bergenia waxay saameyn ku leedahay mareenka caloosha iyo mindhicirka waxayna ka hortagtaa dufanka jirka.
Shaah Badana waxay leedahay mashiinka, dharka, ficilka antimicrobic. Waxa uu awoodaa in uu cadaadis dhexdhexaad ah uu hoos u dhaco, si yar u yareeyo heerkulka jirka iyo waxoogaa kor u qaada heerka wadnaha.
Altai waxaa loogu yeeraa si fiican oo kicin leh dareenka jirka iyo maskaxda, wuxuu saameyn ku yeeshay jidhka.
Xaaladaha xanuunka mindhicirka, laabotooyinka, arthrosis iyo arthritis, cudur kalyaha, daaweynta goiterka, shaah bergenia ayaa sidoo kale loo isticmaalaa.
Waa muhiim! Waa lagama maarmaan in la tixgeliyo dhamaan saameynta isticmaalka bergenia. Xitaa haddii la tilmaamayo in saameyntu ay tahay mid aan muhiim ahayn, qofku wuxuu noqon karaa mid xoogan.
Badan sidoo kale waxay leedahay adeegsiga dibadda. Iyadoo qaabka budada ah ay ku rusheeyeen boogaha iyo boogaha dhiigbaxa. Nabaro, waxaad samayn kartaa cadaadis ah oo xoojin doona dib u soo celinta xinjirta.
Sidoo kale daawada dadku waxay ku dhaqmeen isticmaalka bergenia for neoplasm of localization kala duwan.
Maraqyada iyo infusions ayaa si ballaaran loo isticmaalaa. Maraq waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo bukaanka. Xaaladdan oo kale, waa inaad qaadataa qubeys ah dabaq ah, heerkulka kaas oo aan ka badneyn 38 darajo. Ku fadhiiso musqusha oo leh bacriminta Badan waxay noqon kartaa ilaa 20 daqiiqo, koorsadu kama badna 15 barkadood.
Goobta Badana waa la dalbadaar ee loogu talagalay qashinka, soosaarista iyo qulqulka. Gubashada waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xayawaanka, nabarka ilmo-galeenka. Ka dib markii la cuno cuntada ka dib saddex jeer maalintii 2 qaado. Cunaha ayaa ku tirtira cudurrada infakshanka jirka. Dib-u-habeynta ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xanuunka dysentery (suurtogalnimada in lagu daro antibiotics).
Waa muhiim! Isticmaalka bergenia muddo dheer waxay sababi kartaa calool-fadhiga. In jiritaanka calool-fadhiga, soo-dhaweynta badana laguma talinayo.
Bergenia waxaa loo isticmaalaa cudurrada noocaas ah sida tiibishada, oof-wareenka, xanuunka dysentery, boronkiito xoog leh. Waxay ka caawisaa sidii ay ula qabsan lahayd cudurrada faafa sababtoo ah sifooyinka awoodda ka hortagga bakteeriyada.
Lacagta laga helo bergenia waxaa loo qaadan karaa si loo wanaajiyo caafimaadka iyo koritaanka xoogga ee da 'weyn, si loo xoojiyo nidaamka difaaca jirka, iyadoo la wiiqayo waxqabadka. Waxa kale oo loo adeegsadaa kareemka jirka - maqaarka wajiga iyo madaxa.
Waxaa jira cuntooyin badan oo ku saabsan sida loola shaqeyn karo si loo helo faa'iidada ugu badan ee ka timaadda geedkaan. Waxaa loo qaataa daawo madaxbannaan, iyo sidoo kale isku dhafka geedaha kale. Xaaladaha qaarkood, isku dar mareegada daroogada iyo helitaanka kirada.
Maydhiyan (Altai) shaah. Haddii aad soo dhejisey caleemaha qallalan ee warshadda Badan, oo ah jiilaal baraf ah, waxaad helaysaa shahada Mongolian ah. Waxaad u baahan tahay inaad qaado 2 qaado oo caleemo la qalajiyey oo ku shub 1 litir oo biyo ah karkaraya.
Si aad u soo dhajiso shaah ka bergenia, waxay qaadataa muddo ka dheer dixinta shaaha madow caadiga ah. Tani waxay sabab u tahay dhumucda caleemaha - bergenia waxay ka weyn tahay tan caleenta shaaha. Ka dib 15-20 daqiiqo oo soo baxa, shaaha waa in la miiray.
Badeecadda Badana iyo soo saar. Ka saarida guryaha dawooyinka ee xididada bergenia waxay u noqon kartaa mid budo ah. Budadaas waxaa loo isticmaali karaa foomka qalalan, iyo sidoo kale loo isticmaalo diyaarinta ee soo saaridda.
Si arrintan loo sameeyo, wax yar oo ka mid ah miisaannada qalajinta, xididdada bergeniyada ayaa lagu shubay 1 koob oo biyo ah karkarana isku dar ah waxaa lagu kariyaa weel xiran illaa kala badh dareeraha. Soo saaridda waxaa la qaadaa dhowr jeer maalintii, 27 dhibcood.
Faleebo. Wixii diyaarinta faleebo u baahan doonaa 20 g oo caleemo iyo ubax bergenia. Iyox ku shub hal galaas biyo kulul kuna adkeyso qubeyska biyaha 15 daqiiqo, kadibna qabow. Diyaarinta tincture waxay qaadataa ilaa 45 daqiiqo. Waxaad qaadan kartaa dhowr jeer maalintii 2 qaado oo kakooban.
Decoction. Wixii maraq waxay u baahan doontaa 15 g oo xididdada, kuwaas oo u baahan in la buuxiyo biyo kulul. Isku darka waa la bakhtiiyaa ilaa nus saac dhexdeeda biyaha qubeyska.
Yaan qaadi Karin Badan
Badan waxay leedahay iska horimaad u adeegsasho, waana kuwan soo socda:
caloosha joogtada ah;
Xaaladaha qaarkood, waxaa suurtagal ah in la isticmaalo Bergenia cadaadis hooseeya, haddii la barbardhigo soo dhaweynta daawooyinka si loo kordhiyo cadaadiska. Marka dhirta 'tachycardia' lagu qaadi karo digniin xad-dhaaf ah qadar yar.